LLPP Jenyo oo ku guuleysatay Super Cub-kii dalka – Radio Muqdisho
Kooxda Kubadda Cagta ee LPP Jeenyo ayaa ku guuleysatay Koobka Super Cup-ka dalka Soomaaliya kaddib ciyaar ay garoonka Banaadir shalay gelinkii dambe kula yeelatay kooxda Banaadir Sport Club.
Ciyaartaan oo xiiso lahayd waxay waqtigii loogu talo galay ku dhamaatay 2:2 ayado ay labada koox ku kala baxeen gool ku laad.
Kooxda Jeenyo ayaa billowgii ciyaarta hoggaanka la wareegtay markii uu gool ku laad ay heshay u dhaliyay Xasan Cabdi Nuur. Kooxda Banaadir ayaa aagga ganaaxa ku jalaafeysay Cabdulcaasii Maxamed Catoos oo weerarka uga ciyaara LLPP Jenyo.
Ciyaaryahan u dhashay dalka Kenya ee u ciyaaraha kooxda Banadir oo lagu magacaabo Marshal ayaa bareejeeyay kooxda LLPP isla qeybta hore ee ciyaarta.
Qeybta labaad, kooxda Banaadir waxay iska dhaliyeen gool, taas oo mar labaad hoggaanka u dhiibtay koxoda Jenyo.
Daqiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta ayay Banaadir SC mar labaad heshay fursad uu gool u beddelay Mustafa oo ah isaguna ciyaaryahan kale oo u dhashay dalka Naigeria.
Ciyaarta ayaa waqtigii loogu talo galay ku dhamaatay 2:2, waxaana loo baahday in loo dhigo gool gu-laad lagu kala saaro labada kooxod. Kooxda Jenyo ayaa ku badisay 5:4. Sidaas ayayna koobka ku qaadday kooxda Jenyo.